Ceftriaxone (စဖ်ထရီရာဇုံး) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Ceftriaxone (စဖ်ထရီရာဇုံး)
Ceftriaxone (စဖ်ထရီရာဇုံး) ကဘာလဲ။
Generic Name: Ceftriaxone (စဖ်ထရီရာဇုံး) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Ceftriaxone (စဖ်ထရီရာဇုံး) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Ceftriaxone(စဖ်ထရီရာဇုံး) ကို ဘတ်တီးရီးယားရောဂါပိုးဝင်ခြင်းတွေမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ cephalosporine လို့ခေါ်တဲ့ ပဋိဇီဝဆေးအုပ်စုထဲပါပြီး၊ ဘတ်တီးရီးယားတွေ ကြီးူထွားမှုကို ရပ်တန့်စေခြင်းဖြင့် အာနိသင်ပေးတယ်။
Ceftriaxone ကဲ့သို့ ပဋိဇီဝဆေးတွေဟာ အအေးမိခြင်း၊ တုပ်ကွေးဖျားခြင်းတွေလို ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းအတွက် အာနိသင်မရှိပါဘူး။ မလိုအပ်ဘဲ သောက်တဲ့အခါ အမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့အခါ ဆေးယဉ်ပါးသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာဝန် ညွှန်မှသာသောက်သင့်ပါတယ်။
Ceftriaxone ကို နှလုံးပြဿနာရှိသူ (ဥပမာ- အဆို့ရှင်လဲထားရသူကဲ့သို့) တွေမှာ သွားဆိုင်ရာတစ်ခုခုမလုပ်ဆောင်ခင်လည်း သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ နှလုံးရောဂါပိုးဝင်မှာကို ကာကွယ်ရန်ဖြစ်တယ်။ (ဘတ်တီးရီးယားကြောင့် နှလုံးအမြှေးရောင်ခြင်း ကဲ့သို့)
Ceftriaxone (စဖ်ထရီရာဇုံး) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
အသားဆေး သို့မဟုတ် အကြောဆေးထိုးပါလိမ့်မယ်။ ပမာဏက ရောဂါအခြေအနေနဲ့ ကုသမှုအပေါ်တုံ့ပြန်မှုပေါ် မူတည်ပါလိမ့်မယ်။
လက္ခဏာတွေပျောက်သွားရင်တောင်မှ ညွှန်းဆိုထားတဲ့အချိန်ပြည့် ဆက်လက်သောက်ပါ။ ဆေးစောစီးစွာရပ်ခြင်းဟာ ဘတ်တီးရီးယားတွေကို ဆက်လက်ကြီးထွားစေတဲ့အတွက် ရောဂါပြန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ရောဂါအခြေအနေပိုဆိုးလာရင်၊ ဒါမှမဟုတ် မသက်သာရင် ဆရာဝန်ကိုပြန်ပြောပါ။
Ceftriaxone (စဖ်ထရီရာဇုံး) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Ceftriaxone (စဖ်ထရီရာဇုံး) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Ceftriaxone နဲ့ဆေးမတည့်ပါက သို့မဟုတ် Cephalosporin အုပ်စုဝင် ပဋိဇီဝဆေးနဲ့ ဓါတ်မတည့်ပါက မသောက်ပါနဲ့။
•	ကျောက်ကပ်ရောဂါ (ကျောက်ကပ်ဆေးနေရပါက)
•	ဆီးချို၊ သွေးချိုရောဂါ
•	အစာအိမ်၊ အူရောဂါ (အူရောင်)
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Ceftriaxone (စဖ်ထရီရာဇုံး) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Ceftriaxone (စဖ်ထရီရာဇုံး) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
•	ဝမ်းလျှောခြင်း (အရည်များ သို့မဟုတ် သွေးများသွားပါက)
•	ဖျားခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း၊ အကျိတ်များထွက်ခြင်း၊ ယားဖုများပေါ်ခြင်း၊ အဆစ်နာခြင်း၊ အလွန်အမင်းနေထိုင်မကောင်းခြင်း
•	ပါးစပ်၊ နှုတ်ခမ်းတို့မှာ အဖြူရောင်အကွက်များ၊ အနာများပေါ်ခြင်း
•	ပုံမှန်မဟုတ်သွေးယိုခြင်း (နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်၊ မိန်းမကိုယ်၊ စအို) အရေပြားတွင် အနီရောင်၊ ခရမ်းရောင်အစက်များပေါ်ခြင်း
•	ယားဖုများပေါ်ခြင်း၊ အညိုအမည်းစွဲခြင်း၊ ထုံခြင်း၊ ကျဉ်ခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ ကြွက်သားများအားနည်းခြင်း
•	ဆီးနည်းခြင်း၊ မသွားခြင်း
•	အသားရောင်ဖြူဖျော့ခြင်း၊ ဝါခြင်း၊ ဆီးအရောင်ညစ်ခြင်း၊ ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ အားနည်ခြင်း
•	ရောင်ခြင်း၊ နာခြင်း၊ ဆေးထိုးနေရာမှ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်ခြင်း
•	ဝမ်းအရောင်ဖျော့ခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ ရင်ပူခြင်း၊ လေပွကာ ဗိုက်ဖောင်းနေခြင်း၊ အစာအိမ်အောင့်ခြင်း
အရေပြားမှပြင်းထန်စွာတုံ့ပြန်မှုများရှိခြင်း- ဖျားခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ မျက်နှာ လျှာများရောင်ရမ်းခြင်း၊ မျက်လုံးများပူစပ်ခြင်း၊ အသားများနာခြင်း၊ အရေပြားပေါ်တွင် အနီရောင် ခရမ်းရောင်အစက်များ ပျံ့နှံ့ခြင်း (အထူးသဖြင့် မျက်နှာနှင့် ခန္ဓါကိုယ်အပေါ်ပိုင်း) အရည်ကြည်ဖုများပေါက်ခြင်း၊ အရည်ခွံများလန်ခြင်း
•	ဆေးထိုးရာနေရာ ဖုဖောင်းလာခြင်း
•	ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း
•	ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မူးခြင်း
•	လျှာရောင်ခြင်း၊ နာခြင်း
•	မိန်းမကိုယ်ယားခြင်း၊ အရည်ဆင်းခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Ceftriaxone (စဖ်ထရီရာဇုံး) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
သင်အခုသောက်နေတဲ့ဆေးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုတုံ့ပြန်ခြင်းတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာဆေးအလုပ်လုပ်ပုံကိုပြောင်းလဲစေတာ၊ ဒါမှမဟုတ် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုပိုဆိုးစေတာမျိုး ဖြစ်စေကောင်းဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ဒါတွေကိုရှောင်ဖို့အတွက် ခုသုံးစွဲနေတဲ့ဆေးတွေအကုန်လုံးကို ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးပေးသူကိုပြောပြရပါမယ်။ ဘေးကင်းဖို့အတွက် ဆရာဝန်ညွှန်ပြချက်မရှိဘဲ ဆေးတွေရပ်လိုက်တာ၊ ပြောင်းလိုက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
အောက်ဖော်ပြပါဆေးတွေနဲ့တော့ တူတူတွဲမသုံးသင့်ပါဘူး။ တကယ်လို့ သင်ကဒီဆေးတွေထဲကတစ်မျိုးမျိုးသုံးနေရရင်၊ နှစ်မျိုးစလုံးကလည်း လိုအပ်နေရင်၊ ဆရာဝန်က တခြားဆေးတစ်မျိုးမျိုးပြောင်းတာဖြစ်ဖြစ်၊ သောက်ရမယ့်အကြိမ်ရေချိန်ဆပေးတာဖြစ်ဖြစ် ညွှန်ပါလိမ့်မယ်။
အောက်ဖော်ပြပါဆေးတွေနဲ့ Carbamazepine ကိုတူတူတွဲမသုံးရပါဘူး။ တကယ်လို ဆေးနှစ်မျိုးစလုံးညွှန်းရင် ဆေးပမာဏပြောင်းလဲတာဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်နှစ်ကြိမ် ဘယ်လိုသောက်သင့်တယ်ဆိုတာ ပြောပြပါလိမ့်မယ်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Ceftriaxone (စဖ်ထရီရာဇုံး) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Ceftriaxone ဟာ အစားအစာတချို့၊ အရက်တို့နဲ့ ဓါတ်ပြုတုံ့ပြန်ပြီး ဆေးအလုပ်လုပ်ပုံပြောင်းစေတာ၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေပိုများစေတာမျိုး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးစမသောက်ခင် ဆရာဝန်၊ ဆေးပေးသူတို့နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Ceftriaxone (စဖ်ထရီရာဇုံး) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
•	အစာအိမ်၊ အူ ရောဂါများ (အူရောင်ခြင်း) – အခြေအနေပိုဆိုးနိုင်တာကြောင့် သတိနဲ့သောက်ပါ။
•	သွေးတွင်း များခြင်း – အသက် ၂၈ ရက်ထက်ငယ်သော ကလေးငယ်များနှင့် ထိုကဲ့သို့အခြေအနေရှိသော လမစေ့ကလေးများတွင် မသုံးသင့်ပါ
•	အသည်းရောဂါ- ဆေးဖယ်ပစ်နိုင်ချိန် ကြာသွားတာကြောင့် ဆေးအာနိသင်ပိုတိုးလာနိုတာကြောင့် သတိနဲ့သောက်ပါ။
•	အာဟာရမပြည့်ဝသောအခြေအနေ- ကြောင့် အခြေအနေပိုဆိုးနိုင်ပြီး၊ ဗီတာမင်-ကေ သောက်ပေးရန်လိုပါလိမ့်မယ်
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Ceftriaxone (စဖ်ထရီရာဇုံး) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အကြောဆေး သို့မဟုတ် အသားဆေး 1 to2g ၊ တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် နှစ်ကြိမ်။ ရောဂါအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ပမာဏကွာခြားပါလိမ့်မယ်။
Staphylococcus aureus ကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါများ-2to4g
တစ်ရက်လျှင်4g ထက်မပိုရပါ။
အကြောဆေး တစ်ရက်2 g ၊ ၁၄ ရက်။ ရောဂါအခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီးပမာဏပြောင်းပါလိမ့်မယ်။
အသားဆေး တစ်လုံး250 mg
ရောဂါဖြစ်စေသောပိုးမှာ Haemophilus ducreyi.
HIV ဝေဒနာရှင်များမှာ အချိန်ကြာကြာကုဖို့လိုပြီး လူနာကနောက်အကြိမ်တွေ ပြန်လာနိုင်မှသာ Ceftriaxone ပေးသင့်ပါတယ။်
တကယ်လို့ စစ်ဆေးမှု negative ဖြစ်လျှင်တောင်မှ နောက်သုံးလအကြာမှာ ကာလသားရောဂါနှင့် HIV အတွက် ထပ်စစ်သင့်ပါတယ်။
chlamydial ရောဂါအတွက်တော့ azithromycin တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် ကိုယ်ဝန်မရှိပါက Doxycycline ကုသမှု ၇ ရက် ပေးသင့်ပါတယ်။
Epididymis ရောင်ခြင်းအတွက်- (လိင်ဆက်ဆံမှုမှကူးနိုင်ပါတယ်)
Gonococcal ပိုးကြောင့်ဖြစ်သော Epididymis ရောင်ခြင်း- အသားဆေး တစ်ကြိမ်250 mg
Doxycycline 100 mg twice သောက်ဆေး တစ်ရက် နှစ်ကြိမ် ၁၀ ရက်ပေးသင့်ပါတယ်.။
အကြောဆေး2g ၇ ရက်မှ ၁၀ ရက်၊ ရောဂါအခြေအနေပေါ်မူတည်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ရက်လျှင် အကြောဆေး2g
ခုခံအားကျဆင်းသူများတွင် ၇ ရက်မှ ၁၀ ရက်အထိ။
ကလေးတွေအတွက် Ceftriaxone (စဖ်ထရီရာဇုံး) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
တစ်ပတ်ထက်ငယ်သောကလေး- တစ်ရက် 50 mg/kg အကြောဆေး သို့မဟုတ် အသားဆေး
တစ်ပတ်မှလေးပတ်အထိ 2000 g နှင့်အောက်- တစ်ရက် 50 mg/kg အကြောဆေး သို့မဟုတ် အသားဆေး
တစ်ပတ်မှလေးပတ် 2000 g ထက်များသူ- တစ်ရက် 50 to 75 mg/kg IV အကြောဆေး သို့မဟုတ် အသားဆေး
ရောဂါပြင်းပါက- အကြောဆေး50 to 75 mg/kg
အသက်အန္တရာယ်ရှိပါက- အကြောဆေး80 to 100 mg/kg
လေးပတ်သားထိ- တစ်ရက်50 to 75 mg/kg
45 kg အောက် – အကြောဆေး သို့ အသားဆေး50 mg/kg/day
45 kg အထက် – အကြောဆေး သို့ အသားဆေး1 to2g
၁၅ နှစ်အောက်- အသားဆေး125 mg
၁၅ နှစ်အထက်- အသားဆေး250 mg
ဆေးမသောက်နိုင်ပါက အကြောဆေး သို့ အသားဆေး 50 mg/kg
ပထမအကြိမ်- အသားဆေး50 mg/kg
ပြန်ဖြစ်လျှင်- အသားဆေး သို့ အကြောဆေး50 mg/kg သုံးရက်
Ceftriaxone (စဖ်ထရီရာဇုံး) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
•	အကြောဆေးသွင်းဆေး 20mg/ml, 40mg/ml
•	အကြောဆေးထိုးဆေး 250mg, 500mg, 1g, 2g